I-USB-C HUB - i-Dongguan Huachuang Electronic Co, Ltd.
Yebo, sihlala sisebenzisa ukupakisha kwekhwalithi ephezulu. Siphinde sisebenzise ukupakisha izingozi ezikhethekile zezimpahla eziyingozi nabakhuthazi besitoreji esibandayo sezinto ezibucayi zokushisa. Ukufakwa kwengozi nezidingo zokupakisha ezingejwayelekile
Izindleko zokuthumela zincike ekutheni ukhetha kanjani ukuthola izimpahla. I-Express imvamisa iyindlela eshesha kakhulu kepha futhi ebiza kakhulu. Ngokuthunga kwasolwandle ikhambi elingcono kakhulu lamanani amakhulu. Amanani akhona wemithwalo ngqo esingakunika wona kuphela uma sazi imininingwane yenani, isisindo nendlela. Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.